Musharax SHIRE XAAJI FAARAX oo la kulmay Haweenka aqoonyahanka ah ee gobolka Bari[Sawirro] | RBC Radio
Musharax SHIRE XAAJI FAARAX oo la kulmay Haweenka aqoonyahanka ah ee gobolka Bari[Sawirro]
Posted on December 12, 2013 Shire X Faarax, Wararka
Boosaaso[RBC Radio] Murashaxa u taagan Jagada Madaxweynaha dowladda Puntland Dr Shire Xaaji Faarax ayaa kulan la qaatay qaar kamid ah haweenka ku dhaqan gobolka Bari,waxayna si qoto dheer uga wadahadleen doorka ay dumarku leeyihiin hoggaanka.
Kulanka oo ka dhacay Hotel International Village ee Boosaaso ayaa su’aalo lagu weydiiyey Murashax Shire Xaaji Faarax,isagoona mid mid uga Jawaabay,waxayna sidoo kale ugu soo Jeediyeen tallooyin iyagoona ku taageeray hankiisa Siyaasadeed.
Faysal Xawar oo u qaabilsan dhanka Ololaha Musharax ayaa ugu horeyn uga mahadceliyey haweenkii kasoo qeybgalay kulanka oo u badnaa dhalinyaro ,wuxuuna sheegay in haweenku yihiin laf-dhabarta bulshadda sidaa darteedna loo baahanyahay in lala tashto.
…..”Waxaan idin kaga mahadcelineynaa sida aad noogala soo qeybgashemaanta waxaan nasiib u yeelay haweenka oo ah laf dhabarta ama xaqiiqdii intii burburku wadanka ka jiray ahaa laf dhabarta lagu baxsaday hadey dhaqan ahaan lahayd hadey xitaa xoogsiga noqon lahayd…..””ayuu yiri Faysal Xawar.
Murashaxa Shire Xaaji Faarax
Musharax Dr Shire Xaaji Faarax ayaa sheegay in ujeedada uu isu sharaxay ay ahayd in ay isbadel dhab ah ka sameeyaan Puntland isaga iyo kooxdiisa la shaqeeya,sidoo kale wuxuu intaas ku daray in horay uga soo qeybqaateen horumarka Puntland.
……..””” Waxaa igu kalifay inaan noqdo Musharax u taagan xilka Madaxtooyada Puntland anigu wax badan badan aniga iyo kooxdeydu(Team-keygu)wax badan baan isku deynayinaanu Puntland hoggaankeeda lug ku yeelano, odayaashii ugu horeeyey ee Puntland aas-aasayna waan la shaqeynaykuwii ku xigay ilaa Cabdirixmaan oo ugu danbeeyey wan la shaqeynay……”””ayuu yiri.
Musharax Dr Shire Xaaji Faarax oo hadalkiisa sii wata ayaa yiri……….””’ Sidaa darteed maanta,waxaan go’aansanay aniga iyo kooxdeydu i garteen inaan isu sharaxo xilka madaxtinimada Puntlandaniga taas waxa kalifay inaan isbadel dhab ah sameeyo oo ku dhisan horumar,cadaalad,iyo maamul baahsan ee ilaa heer tuulo la gaarsiiyo,wax badan marar badan waan ka ir…….””’ayuu yiri.
Farxiya Warsame oo su’aal weydiineysa Murashax Shire Xaaji
Wuxuu sheegay Musharax Dr Shire Xaaji Faarax in qorshihiisa ugu horeeya uu yahay in uu wax u qabto hooyada iyo dhalaanka isla markaana uu si fiican uga fekeri doono dhanka Caafimaadkooda,waxbarashadooda isla markaana uu kobcin ku sameyn doono dhaqaalahooda.
……..”””Qorshhaygu waxa weeye inaan tayeysiino hooyooyinka iyo dhalaanka intaba anagoo ka fekereyna Caafimaadkooda,waxbarashadooda,waxyaalo badan ayaan dooneynaa in hooyooyinka iyo dhalaanka u qabano ,waxaanu dooneynaa inaan kobcin ku sameyno dhaqaalahooda sababtoo ah hooyadu waa iyada aas-aaska nolosha…..”””’ayuu yiri.
Farxiyo Warsame Cabdi oo kamid ahayd haweenkii uu kulanka la qaatay Murashax Shire Xaajiayaa Murashaxa weydiisay su’aal ahayd sidan””’ Ma u maleyneysaa marka aad ku guuleysato Doorashada oo aad noqoto Madaxweyne inaan heleyno doorka aan bulshada ku leenahay xaga qeybsiga xukunka ?
Murashaxa Dr Shire Xaaji Faarax oo uga Jawaabayey Farxiyo Warsame su’aashii ay weydiisay ayaa sheegay in doorka ay ku leeyihiin dhan kasta iney ka qaataan isla markaana uu qudhiisu qorshaha ugu weyn qorshihiisa ugu jirto.wuxuuna yiri isaga oo ka Jawaabaya.!
Jawaab…….”””Waaxaa qorshahayga igu jirta iney qaataan doorka ay ka maqanyihiin sababtoo ah anigu gabdhaan leeyahy,gabadhahayguna mar kasta waxay leeyihiin saas maahan iyo saas maahan sidaa darteen marka gabdhuhu sida ugu wanaagsan iney u qaataan doorka ay leeyihiin…….”””ayuu yiri.
Si kastaba Musharax Dr Shire Xaaji Faarax ayaa wada Ololihiisii ugu danbeeyey ,isagoona booqday deegaano ka baxsan dhanka laamiga talaabasaasna ay si weyn usoo dhaweeyeen dadka deegaanadaas ku dhaqan.